Times24 Nepal » प्रहरी प्रमुख खनाललाई प्रेम बानियाँको २ गम्भीर प्रश्न ? आखिर किन भयो त्यस्तो ?
पत्रकार प्रेम बानियाँले रबि लामिछनेको विषयमा फेरि आज सवाल उठाएका छन् । प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो भनेका छन् ।प्रिय मित्र/प्रिय व्यक्तित्व Sarbendra Khanal ज्यू, तपाईंको निष्ठा, कार्यकुशलताको खुब ठूलो प्रशंसकले उसको ज्ञान र अध्ययनका आधारमा तपाईंलाई नितान्त व्यक्तिगत दुईटा प्रश्न वा सुझाव प्रस्तुत गर्दैछ।
नम्बर १, त्यो भिडियो कसरी बाहिर आयो ? अनुसन्धानमा अब्बल नेपाल प्रहरीमा तपाईंको अब्बल अनुभवलाई साक्षी राखेर सोधिएको प्रश्न हो यो । आ.त्मह.त्या गरेको व्यक्ति भएको कोठा प्रहरीले फोडेको हो, त्यो कोठामा सवभन्दा पहिला प्रहरी छिरेको हो । सबै प्रमाणहरु (मोवाइल, कागजात वा अन्य सबै) प्रहरीले नै संकलन गरेको हुनुपर्छ/हुनैपर्छ । त्यसपछि सवै स्रोत र सूत्रहरु गो.प्य राखेर सुक्ष्म र गो.प्यरुपमै अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यो भिडियो कसरी बाहिर आयो ?
यतिसम्म कि त्यो भिडियो आफन्तको हातमा पनि पुग्न सक्दैन, मिल्दैन र सम्भव छैन । किनकि यो प्रहरी अनुसन्धानको विषय भइसकेको थियो । सबै स्रोतहरु प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । संसारको कुनैपनि प्रहरी संगठनले वा अनुसन्धानमा संलग्न कुनैपनि निकायहरुले यस्तो गर्न सक्दैनन्, यो कसरी भयो ???? त्यो भिडियो प्रहरीको नियन्त्रणबाट बाहिर कसरी गयो ? यसको जवाफ प्रहरीले मात्रै दिनसक्छ । अनुसन्धान विषयमा यो एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न हो ।
नम्बर २, रबि लामिछानेलाई पत्र काटेर निश्चित घण्टाभित्र प्रहरीको कुनै पनि कार्यालयमा बोलाएको भए के हुन्थ्यो ? न्यूजरुममा काम गरिरहेको पत्रकारलाई त्यो पनि डेढ घण्टापछि प्रत्यक्ष कार्यक्रम प्रशारणको तयारीमा रहेको प्रस्तोतालाई टेलिभिजन स्टेशनमै गएर पक्रा.उगर्नुअघि प्रेस स्वतन्त्रताका अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुलाई किन भुल्नुभयो?
प्रकाशित मिति १ भाद्र २०७६, आईतवार ०४:०२